Wasiir Janan oo Dagaal kale ku goodiyey | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wasiir Janan oo Dagaal kale ku goodiyey
Wasiir Janan oo Dagaal kale ku goodiyey
Wasiirka Amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa ka dhawaajiyay ineysan u dulqaadan doonin wixii ka dhacay Beledxaawo isla markaana ay tallaabo qaadi doonaan.
Janan ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah ciidamada dowladda ee ku sugan Beledxaawo, wuxuuna shacabka ugu baaqay iney isaga baxaan magaalada.
C/rashiid janan ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu la qaatay xildhibaano ka tirsan Jubbaland iyo Saraakiisha ciidamada Daraawiishta maamulkaas, kaasoo looga hadlay xiisada ka taagan degmada Belad-xaawo.
Wasiir Janan ayaa ku eedeeyey Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday ee Somalia Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu hurinayo dhibaatooyinka ka jira Beled-xaawo, uuna masuuliyadeeda qaadi doono wixii dhibaato ah ee ka yimaada.
Dagaal saacado socday oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidamo uu hogaaminayo wasiirka Amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa dhowaan ku dagaalamay degmada Belad-xaawo kaasoo geystay khasaare nafeed.
Previous articleMadaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo Saxiixa 13 kursi oo ah mid kumeel gaar ah
Next articleBanaanbax weyn oo Madaxweyne Farmaajo lagu taageerayo oo ka dhacay magaalada Muqdisho
Hay’adda QM u qaabilsan arrimaha Bini’adamnimada ee OCHA oo shegtay in...
Xasan Sheekh oo ku tilmaamay afganbi Ciidan wixii manta baarlamaanka ka...
Dagaal culus oo degmada Ceelwaaq oo ka tirsan Gobolka Gedo ku...